လောဘကြီးတယ်ဆိုတာ မကောင်းမှန်း အတော်များများက လက်ခံထားကြပါတယ်… ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို သာမန်ထက်ပိုလိုချင် ပိုရချင်တာ… သူတပါးပစ္စည်းကို မတရားရယူချင်တာ… ကိုယ်ရဖို့အတွက်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မငဲ့ကွက်ဘဲလုပ်တာမျိုးကို လောဘကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်… တစ်ချို့ကျတော့ ငါကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လောဘကြီးတယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူပြောဆိုတတ်ကြတယ်… ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် လောဘတက်တာမဟုတ်ဘဲ အလုပ်အပေါ်မှာ လောဘထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အပြစ်မရှိတဲ့အပြင် ဂုဏ်ယူစရာလို့ ရှုမြင်နေတဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်…..
အလုပ်ကို အလေးအနက်ထားတာ၊ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တာကောင်းပေမဲ့ အစွန်းရောက်သွားရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး… လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့နေရာမှာ အချိန်၊ လူ၊ ငွေ၊ ပစ္စည်း၊ စနစ် ဆိုတာတွေပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်… လုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ သင့်လျော်တဲ့အချိန်ပေးရပါမယ်… လုပ်ဆောင်မယ့်လူတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု၊ ရရှိနိုင်မယ့်လူအင်အား စတာတွေကို ထည့်တွက်ရပါမယ်… လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာမှာလိုအပ်မယ့် ငွေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာပြည့်စုံလုံလောက်မှု၊ ထပ်မံရရှိနိုင်မှု စတာတွေကလည်း အလုပ်ပြီးမြောက်မှုအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်… နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ့်အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ မူဘောင်နဲ့ စနစ်ထဲကပဲ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကန့်သတ်ချက်လေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်… ဒီလိုအကြောင်းခြင်းရာတွေ အများအပြားရှိတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့ဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို၊ ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး…
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုဖြစ်မှ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာထိရောက်မှ၊ ဘယ်စံနှုန်းမီမှဆိုပြီး အတင်းအကြပ်သတ်မှတ်တာမျိုးဟာ အများအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပါတယ်… သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်အောင်ချက်ဖို့လိုတယ် ဆိုသလိုပဲ အလုပ်ကိုလည်း ထိုက်သင့်တဲ့လိုလားချက်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်… ရေသာခို အချောင်လိုက်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကွပ်ကဲကြပ်မတ်ဖို့လိုသလို လက်အောက်ကလူတွေအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်အောင်လည်း တာဝန်ပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်… လိုလားချက်တွေက အရမ်းမြင့်မားလွန်းပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကကျဆင်းနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး… မဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကို ရည်မှန်းချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူပန်းဖြစ်တဲ့အပြင် ပုံမှန်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေပါ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်…
နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်… လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ သင့်လျော်တဲ့သင်တန်းများပေးနိုင်မှုတို့အပြင် အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ ခံစားချက်၊ ခံယူချက်၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ အလေ့အကျင့်၊ မိသားစုအခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ စတဲ့အကြောင်းအချက်ပေါင်းများစွာအပေါ်မှာ မူတည်နေပါသေးတယ်… လုပ်ငန်းအတွက် လူမှန်နေရာမှန် တာဝန်ပေးတတ်ဖို့လိုသလို အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်… ဒါမှ သူတို့နဲ့သင့်လျော်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး မိမိလုပ်ငန်းပြီးမြောက်ဖို့ ထိန်းကြောင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…. မိမိကိုယ်တိုင်က လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ သက်သာချောင်ချိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်ရေး၊ သင့်လျော်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေ ခံစားခွင့်တွေရရှိရေးတို့ကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘဲ မိမိအလုပ်လိုလားချက်ကိုပဲ တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး…
တစ်ချို့အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူတွေရှိပါတယ်… သူတို့အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထက်ကို ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်… အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလည်း သိမြင်သုံးသပ်နိုင်ပြီး သူတို့နဲ့သင့်လျော်တဲ့ ရာထူးအဆင့်အတန်းရောက်အောင် တိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်… သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ အလျဉ်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်သူမျိုးဟာ ဒီလိုလူတွေဖြစ်ပါတယ်… သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်း တဖြေးဖြေးကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်… ပေါချောင်ကောင်းဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာမရနိုင်ပါဘူး…. ထိုက်သင့်တဲ့လုပ်အားအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုရှိရပါမယ်… ဒဏ်ပေးဖို့အတွက်အမြဲအသင့်ရှိပြီး ဆုမပေးတတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးဟာ အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…. လက်အောက်နဲ့ အပေးအယူမျှဖို့လိုပါတယ်…. သင့်လျော်တဲ့အဖိုးအခပေးဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့….
အလုပ်မှာလောဘထားတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်… ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အောက်ခြေသိမ်းလိုက်လုပ်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး… မိမိအဆင့်နဲ့သင့်လျော်တဲ့ စစ်ဆေးမှု၊ ကြပ်မတ်မှု၊ လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးမှု၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးမှု စတာတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ်တိုင်က ထိုင်ရာကမထဘဲ အလုပ်လောဘကြီးနေလို့မရပါဘူး… ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရလို့ဆိုပြီး မိမိလက်အောက်ငယ်သားတွေကို အနားမပေးတာလည်း မှားယွင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်… မိမိကပိုကြီးမားတဲ့ရာထူးကိုယူထားမယ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်တွေပိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိကပိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်… တာဝန်ပိုယူဖို့လိုပါတယ်… လက်အောက်ကလူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ လုပ်အားခ၊ ခန့်အပ်ထားတဲ့ တာဝန်ထက်ကျော်ပြီး လုပ်အားရယူတာမျိုးဟာ မတရားမှုသက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်… သင့်လျော်တဲ့ အနားပေးမှုလည်း မလွဲမသွေရှိရပါမယ်…
မိမိအလုပ်မှာ အာရုံစူးစိုက်ပါ… အလေးအနက်ထားပါ…. ရည်မှန်းချက်ထားပါ…. ရည်မှန်းချက်နဲ့ပြည့်မီအောင်ကြိုးစားပါ…. ဒါပေမဲ့ လောဘမထားပါနဲ့…. စပါးပင်စိုက်ပြီး သရက်သီးသီးချင်လို့မရပါဘူး… လောဘဆိုတာ ဘယ်လောဘမှ ကောင်းတာမရှိပါဘူး… သမာသမတ်ရှိရှိနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်… မိမိဘက်က ဖြည့်ဆည်းမှုမရှိဘဲ လက်အောက်က အများကြီးမမျှော်လင့်ပါနဲ့…. လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို လျော့မတွက်ပါနဲ့… မျှတတဲ့သဘောထားရှိပြီး သင့်လျော်တဲ့ရည်မှန်းချက်လေးတွေ ချမှတ်လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်အဆင်ပြေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို သင်ပိုင်ဆိုင်ရမှာသေချာပါတယ်…
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/23/2015 08:52:00 AM